के अनियमित महिनावारीले गर्भवती नहुने सम्भावना हुन्छ? – Health Post Nepal
२०७८ माघ १ गते १२:३२
काठमाडौं – जब महिलामा बाँझोपनको कुरा आउँछ, ३० देखि ४० प्रतिशत केसहरुमा ‘ओभ्युलेसन डिस्अर्डर’ को कारण बाँझोपन देखिन्छ। यस्तो डिस्अर्डरले अण्डाशयबाट अण्डा निस्कनमा धेरै अवरोधहरू सिर्जना गर्दछ, जुन गर्भवती हुने मुख्य मापदण्डहरू मध्ये एक हो।
अनियमित महिनावारी र कहिलेकाहीँ पेटबाट रगत बग्नु यस्तो संकेत मानिन्छ कि तपाईं ओभ्युलेसन गरिरहनु भएको छैन। यस्तो अवस्थालाई एनोभुलेसन भनिन्छ। यो एक गम्भीर समस्या हो। तर, चिन्ता नगर्नुहोस् यो विभिन्न प्रजनन विकल्पबाट उपचार गर्न सकिन्छ।
यद्यपि, कुनै पनि उपचार प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि प्रजनन विशेषज्ञहरूले थाइरोइड अवस्था वा एड्रेनल वा पिट्यूटरी ग्रन्थिहरूको असामान्यताहरूको सम्भावनालाई पत्ता लगाउन अन्य परीक्षणहरू पनि गर्छन्।
यदि महिनावारी नियमित भइरहेको छैन र रगत पनि कहिले बढी र कहिले कम आइरहेको छ भने यसलाई महिनावारी गडबडी भनिन्छ। यो सबै एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हार्मोनको स्तरमा हुने परिवर्तनका कारण हुन्छ। अनियमित महिनावारीका अन्य कारणमा –
– आइयुडीको प्रयोग
-धेरै व्यायाम गर्दा
-गर्भावस्था वा स्तनपानले
के ओभुलेसन डिस्अर्डरमा गर्भवती हुन सम्भव हुन्छ?
प्रजनन क्षमताका औषधिहरूले ओभुलेशन डिस्अर्डरको उपचार गर्न सक्छ। तर केही औषधिहरूलाई डिम्बाशयको हाइपर स्टिमुलेशन सिन्ड्रोमबाट बच्नको लागि अण्डाको विकासमा कडा निगरानी चाहिन्छ। वा फोलिक्युलर निगरानी आवश्यकता रहन्छ। तथापि, यी औषधिहरूको प्रभावकारिता उच्च रहन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार करिब ९० प्रतिशत महिलाहरू यी औषधिहरूबाट ओभ्युलेसन गर्छन् र २० देखि ६० प्रतिशत गर्भवती हुन्छन्।
बाँझोपन ल्याउने सबैभन्दा ठूला कुरा हुन्, हार्मोन असन्तुलन, पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम (पीसीओएस), एन्डोमेट्रिओसिस, डिम्बग्रन्थि चक्र, शारीरिक अवरोध, अपर्याप्त हर्मोन उत्पादन, कम ल्यूटल फेज र ल्युटिनाइजिङ्ग हर्मोनको कमी, प्रोल्याक्टिनको उच्च स्तर र अन्य।
प्रजनन चक्कीहरू बाहेक जीवनशैली र पोषण परिवर्तनले तपाईंको शरीर र प्रजनन प्रणालीको विकासमा ठूलो योगदान दिनसक्छ।
आजको समयमा धेरै तौल भए पनि अधिकांश महिला कमजोर छन्। त्यसैले याद गर्नुपर्छ कि यदि शरीरमा गर्भधारण कायम राख्नको लागि आधारभूत आधार छैन भने यसले गर्भधारण वा गर्भावस्थालाई जारी राख्न अनुमति दिँदैन। महिलाहरू सामान्यत: तौल घटाउनको लागि कम बोसो र उच्च फाइबरयुक्त आहारमा जान्छन्। तर, प्रजनन क्षमता बढेको अवस्थामा, हर्मोन उत्पादनको लागि आवश्यक प्रोटिन र फ्याटहरूसहितको आहार लिनु आवश्यक हुन्छ।
केहि महिलाहरु को लागि पोषण निकै आवश्यक हुन्छ। तर, एक पटक बच्चा जन्मेपछि महिलाहरूले आफ्नो पोषणलाई बेवास्ता गर्न थाल्छन्। गर्भावस्थाका लागि र गर्भमा रहेको बच्चाको वृद्धि र आमाको शरीर विकासका लागि उचित पोषण महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
निद्राको कमी, हानिकारक रसायनको सम्पर्क, उच्च तनाव स्तर र केहि औषधि वा सप्लिमेन्टहरू स्वस्थ जीवनशैलीका समस्याहरू हुन्। जसले बाँझोपन निम्त्याउँछ। यदि हामीले यी सबै कारकहरूमा नजर राख्छौं र लगनशीलताका साथ तिनीहरूलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास गर्छौं भने आधा युद्ध जितिन्छ।